6 qaabood oo lagu xakameeyo Isfaham waaga ka dhexeeyo adiga & Lamaanahaaga - Aayaha
6 qaabood oo lagu xakameeyo Isfaham waaga ka dhexeeyo adiga & Lamaanahaaga
Shabakadda Arrimaha Bulshada ee Aayaha Online, ayaa waxa ay idiin soo gudbineysaa 6 siyaabood oo lagu xakameeyo isfaham waaga kaala dhexeeya lamaanahaaga.
1. Ha joojin xushmadda
Qaabka ugu waangsan ee lagu xakameeyo isfahm waaga kaala dhexeeyo lamaanahaaga waa inaad sii wadaa xushmadda idinka dhexeyso labadiina, marka ay xushmadda jirto waxaad arkeysaa waxyaabaha wanaagsan ee aad tiraahdid ama aad sameysid, balse marka xushmadda Meesha ka baxdo, isfaham waaga waxa uu sababayaa dhibaatooyin xad dhaaf ah.
2. Tanaasul sameey
Isfaham waa ayaa kaala dhexeeyo lamaanahaaga, wax ayaad rabtaa xaaskaagana ama seygaaga wax kale ayuu rabaa.
waxa ugu fudud ee la sameeyo ayaa ah tanaasul, hadii labadiina aad diyaar u tihiin tanaasul, dhibaatada Meesha mar uun ayay ka bexeysaa, balse hadii meeshaada aad ku dheganaatid xaalka wuu kasii daraa.
Marka ay lamaanaha dagaalamaan ama ay arrin ka dhexeyso, dambiga ugu weyn ee ay sameeyaan ayaa ah isma maqlaan isdhageysi ma jiro.
Marka haddii aanan qof walba cabashadiisa la dhageysan xal ma jiraayo sidaa darteed, waxaa wanaagsan in qofba qofka kale uu dhageysto waxaa si walba markaas imaanaya xal.
4. Ka fiirso waxa aad ku hadashid
Iska ilaali waxa aad tiraahdid iyo sida aad u tiraahdid marka uu isfaham waa kaala dhexeeyo lamaanahaaga, ereyada aad ku hadashid waxa ay noqon karaan kuwo aanan la qaadan Karin, waxayna si qoto dheer u xanuunjinayaan una dhaawacayaan lamaanahaaga mana ogid taas, sidaas darteed, ka fiirso waxa aad ku hadleysid iyo sida aad u dheheysid.
5. Xakameey dareenkaaga
Xakameey dareenkaaga oo marnaba yeysan qiiro ku qaadin inta muranka uu socdo, wey kuu fududaaneysaa inaad kahortagtid ama xakameysid muranka marka aad dareenkaaga celisid.
6. Ha hilmaamin inaad iska ilaalisid waxa bur burinaya xiriirka
Ugu dambeyn, Ha illoobin inaad iska ilaalisid wax walba oo xiriirkiina bur burinaya isla markaana dhibaato idin kala dhex galinaya adiga iyo lamaanahaaga.
4 Calaamadood Oo Muujinaya Inaad Heshay Gabadhaad Guursan Lahayd
UGAAR AH DUMARKA: 6 Nooc Oo Ragga Kamid Ah Oo Ay Tahay Inaad Ka Fogaatid
5 Nooc Oo Ragga Kamid Ah Oo Haweenku Ay Qadariyaan Kuna Duceystaan